हरेक निर्णयमा आईसीसीको भर पर्नुपरेको छ – क्यान अध्यक्ष (अन्तरवार्ता) - Khelpati
आइतवार, आश्विन ११, २०७७ विश्वास थापा
क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द । फाेटाे : खेलपाटी
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को साढे ३ वर्षको निलम्बन आश्विन २७ गते अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बाट सशर्त फुकुवा भयो ।
सशर्त फुकुवा हुनुको मुख्य आधार थियो, आश्विन १० र ११ भएको क्यानको साधारण सभा ।
साधारण सभाले चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेकाे थियो ।
नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानका लागि आईसीसीले बनाएको सल्लाहाकार समितिले क्यानको विधान तयार गरेको थियो ।
सोहि विधानमा केन्द्रित रहेर क्यानको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचन भएको थियो ।
निर्वाचनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिले आइतबार एक वर्षको कार्यकाल पुरा गरेको छ । विगत एक वर्षमा क्यानले खासै सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको क्रिकेट सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
क्यानका पदाधिकारी भने कोरोना महामारी र सशर्त फुकुवाको कारण काम गर्न ढिलाई भएको बहाना बनाउने गरेका छन् ।
निलम्बन फुकुवापछि क्यानले घरेलु भूमिका भएको त्रिदेशीय एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय सिरिजको सफलतापुर्वक आयोजना गर्यो । त्यस बाहेक विवादीत देखिएपनि पुरुष खेलाडीको तलब वृद्धि गर्दै महिला खेलाडीलाई पहिलो पटक तलब सम्झौतामा समावेश गर्यो ।
तर निर्वाचनको झण्डै एक वर्ष बितेपनि क्यानले आईसीसी र सरकारको विश्वास जित्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो ।
क्यान निर्वाचनको पहिलो वर्षको सन्दर्भमा रहेर क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसंग खेलपाटीका संवाददाता विश्वास थापाले गरेको कुराकानी ।
क्यान आएको एक वर्ष पुग्यो, आईसीसीबाट शसर्त फुकुवा भएको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो, क्यानले के के काम गर्यो ?
क्यान अस्तित्वमा आएपछि आईसीसीबाट शसर्त फुकुवा भयो । शसर्त फुकुवा भएपछि पूर्ण रुपमा फुकुवा हुन पुरा गर्नु पर्ने शर्त पुरा गर्दै आएका छौं । यससंगै क्रिकेट संघले गर्नु पर्ने वार्षिक कार्यक्रम, त्यसै बीचमा ट्राइसिरिज गर्ने मौका मिल्यो । ट्राइसिरिज हाम्रो लागि परिक्षा थियो, सफलतापुर्वक सम्पन गर्यौं ।
ट्राइसिरिज लगत्तै ५ वटा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु गर्ने तालिका थियो, जुन आईसीसी समेत यसको जानकार थियो । तयार भएको वार्षिक क्यालेन्डर कोरोना माहामारीको कारण पुरा हुन सकेन । कोरोनाकै कारण तालिकामा रहेको थुप्रै कार्यक्रम गर्न सकिएन ।
क्रिकेटलाई सशक्त बनाउने र जिल्लालाई बलियो समेत बनाउने उद्धेश्यले हरेक जिल्लालाई ५० हजार र हरेक प्रदेशलाई १ लाख दिएका छौ । यसै वर्षबाट १ लाख र ३ लाख दिने सोच बनाए पनि आर्थिक अभावका कारण सकिएन । प्रतियोगिता र कार्यक्रम गर्न पाएनौं । कार्यक्रम नभएपछि आम्दानी भएन ।
आईसीसीले कर्मचारी नियुक्ति, अफिस बनाउने भन्यो । मुख्य प्रशिक्षक, सातवटै प्रदेशमा १–१ प्रशिक्षक दिने निर्णय, पुरुष टिमको तलबमा वृद्धि गरिएको छ । महिलालाई पहिलो पटक केन्द्रिय सम्झौतामा समेटेका छौ । टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय र एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय खेल्ने खेलाडीलिई ५ हजार म्याच फिस दिने निर्णय गरेका छौं । खेलाडी र क्यान कर्मचारीको वार्षिक दुर्घटना विमा गर्ने तयारी भएको छ ।
प्रतियोगिताको हिसाबमा अहिले नेपाल मात्र हैन, संसारभर अस्तव्यस्त छ । विश्वमा दर्शकविना प्रोटोकल अपनाएर प्रतियोगिता सुरु भएका छन् । तर सरकारले अनुमति नदिएको कारण ढिलाई भएको छ । सरकार र राखेपले प्रशिक्षण सुरु गर भन्ने वित्तिकै प्रशिक्षण सुरु हुन्छ । हामी तयार अवस्थामा छौं । कम्तिमा मंसिरभित्र महिला र पुरुष दुवैको राष्ट्रिय प्रतियोगिता र डिसेम्बरभित्र एक ट्राइसिरिज गर्न पहल गर्छौ ।
सन् २०२० को जनवरीदेखि काम गर्ने तालिका थियो । मुस्किलले ६ महिना मात्र काम गर्न पायौं । गर्नु पर्ने धेरै छ, प्रयास पनि सकारात्मक भए । जुन राम्रो पक्ष रह्यो । जेनेरल म्यानेजर र क्रिकेट म्यानेजर आएपछि क्यानले अझ गति लिने विश्वास लिएका छौं ।
पछिल्लो एक वर्षमा क्यानले कहाँ कहाँ समस्या झेल्नुपर्यो ?
मुख्य समस्या त कोरोनाले गर्दा नै आयो । सबै कुरा गर्दा समस्या आउछ, मुख्य कोरोनाले गर्दा काम रोकियो । सबै टिमको अहिलेसम्म प्रायोजक आइसक्थ्यो ।
सबै व्यवसायीक क्षेत्रसंग कुरा भएको थियो, तर कोरोनाले सबै क्षेत्र धरासायी बन्दा हात हाल्न गाह्रो भएको छ । कमाइ छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरु टाढा भाग्नु भएको छ ।
आम्दानी छैन भने काम गर्न असहजनै हुन्छ ।
पूर्ण रुपमा फुकुवा हुन आईसीसीको जुन शर्तहरु छन्, त्यसलाई क्रमश पुरा गर्दै आएका छौं । वार्षिक साधारण सभा पनि त्यसको एक लक्ष्य हो । अफिस स्टाफ, जुन हामीले विज्ञापन गरेका छौं ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिता त्यसको लक्ष्य हो । धेरै कुरा आईसीसीको पुरा गरिसकेका छौं । अब राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन सक्यौं भने पूर्ण रुपमा क्यान फुकुवा हुने बाटो पुरा गर्छ ।
आईसीसीले क्यानलाई विश्वास गर्न सक्ने काम गर्दै आएका छौं ।
आईसीसीबाट शसर्त फुकुवा भएका छौं । हरेक निर्णयमा आईसीसीको अनुमती लिनुपर्दा काम गर्न कत्तिको समस्या भईरहेको छ ?
पक्कै असर गरेको छ । आईसीसीको साधारण सभा समेत नेपालको एक पाटो थियो । दक्षिण अफ्रिकामा हुने साधारण असभामा नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने भन्ने थियो । त्यो सबै कोरोनाको कारण स्थगित भयो ।
आईसीसीको साधारण सभा नभएपछि नेपाल प्राथमिकतामा परेन । उसको ध्यान ठुला टेष्ट राष्ट्र र प्रतियोगितामा केन्द्रित भयो । हामीले समेत आईसीसीको कर्मचारीसंग निर्णय गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।
जुन निर्णय लिन समेत आईसीसीको भर पर्नु पर्दा लामो समय खर्च भएको छ । लामो समय लागेको कारण खासै काम भएको देखिंदैन ।
क्यान आईसीसीको बजेटमा निर्भर देखिन्छ । एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रायोजक जुटाउन किन नसकिएको हो ?
प्रायोजकको कुरामा धेरै नजिक थियौं । धेरै माथिसम्म पुगेका थियौं । तर प्रायोजकसंग सम्झौता नजिक आइपुग्दा कोरोना बाधा बन्यो । माहामारीको कारण त्यो बेला कुरा गरिएका प्रायोजक अहिले ५० प्रतिशतमा झरेका छन् ।
पुरुष टिमको प्रायोजनमा जुन पैसा मागिएको थियो, त्यसमा मात्र ५० प्रतिशत दिने कुरा गर्छन् । किनकी उनीहरुलाई समेत कोरोनाले प्रभावित पारेको छ । कोरोनाको कारण प्रायोजकले हात झिक्दै आएका छन् ।
प्रतियोगिता गर्न क्यानसंग पैसा हुन आवश्यक छ । कि सरकार कि प्रायोजकबाट आउन आवश्यक छ । अहिले न प्रतियोगिता छ, न प्रायोजक खुलेर आउन सकेका छन् ।
हतारमा सस्तो प्रायोजकसंग सम्झौता गर्नु पनि भएन । हतारमा गर्दा बेफाइदा हुन्छ । दिर्घकालिन सम्झौता हुन्छ । लामो समयको सम्झौता अहिले कौडीको भाउमा गर्दा दिर्घकालिन असर पर्ने देखियो ।
प्रायोजकको विषयमा नजिक पुरेर पनि सम्झौता गर्न अनुकुल समय पर्खिरहेका छौ । उमेर समुहदेखि महिला टिमसम्मका लागि प्रायोजक तयार अवस्थामा छन् ।
निलम्बन अघिको क्यान र निलम्बन पछिको क्यानमा के फरक छ ?
फरक छ । हामी आधिकारिक क्यान हो । हामीले गल्ती गरेको छैनौ । बेकारमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको कारण नेपाली क्रिकेटले दुख पाएको हो । क्यानको गतिबिधि गर्ने, बैठक गर्ने, साधारण सभा गर्ने भनेको क्यानको निरन्तरता हो । अहिले क्यान आईसीसीको पुनः सदस्य भएको कारण सबै कुरा गरिरहेका छौं ।
फरक यति मात्र हो, पूर्ण फुकुवा भएको बेला योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने थियौं । अहिले आईसीसीबाट पास गराएर मात्र गर्नुपर्छ । अलिकती लामो प्रक्रिया मात्र हो ।
एक वर्ष कार्यकालको मुल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
काम गर्ने समय पुरा एक वर्ष पाएको भए मुल्याङ्कन गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । गत चैतदेखि काम गर्न नपाएर ६ महिना यत्तिकै बित्यो । आईसीसीले क्यानलाई जनवरीदेखि काम गर्न भनेको हो । हिसाब गर्दा ३ महिना मात्र काम गर्न पायौं । त्यसैले हाम्रो कारणले भन्दा परिस्तिथीले काम गर्न नपाएको हो ।
कप्तान करुणारत्नेले दोस्रो टेस्ट गुमाउने
सुदूरपश्चिमद्वारा पुलिसलाई १११ रनको लक्ष्य
सेभियाको संघर्षपूर्ण जित
लेवरकुसेनसँग डर्टमण्ड पराजित
साउथह्याम्पटन चौंथो चरणमा